Muqaalka:Qaabka Loo Dilay Hogaamiyaha Daacish Al-Baqdaadi. – KHAATUMO NEWS
Muqaalka:Qaabka Loo Dilay Hogaamiyaha Daacish Al-Baqdaadi.
Wuxuu sheegay in la aruuriyey haraadigii meydka Baqdaadi kadib markii uu isku qarxiyay god dhexdiisa, halkaas oo uu ku dilay laba caruur ah oo uu watay isla markaasna lagu aasay badda dhexdeeda. McKenzie wuxuu sheegay in warbixinnada bilowga ah ay sheegeen saddex carruur ah, laakiin baaritaanadii dambe waxay muujisay laba. Labaduba waxay da’doodu ka yartahay 12 sano, ayuu yiri.Kooxda Daacish ayaa illaa iyo haatan wax war ah kasoo saarin sheegashada Mareykanka ee dilka Amiirkeeda, wallow warbaahino kala duwan oo kooxdu leedahay ku kala qeybsameen xaqiijinta warka geerida.
Previous Post: Madaxweyne Deni Oo Diyaariyay Qorshe Labo Daran Mid Doorro Ku Ah Gudoomiyaha Barlamanka PL
Next Post: Daawo:Madaxweynaha Puntland Oo Gacnta Ku Dhigtay XIldhibaano Mucaarid ku Ahaa,